Jowhar.com - Somali news Leader - News: Qiisaba qiiseey keenta markana waa sheekadii hubaal caashaq iyo hinnaaso dumar qeybti 44aad.
December 13 2013 20:03:41
Qiisaba qiiseey keenta markana waa sheekadii hubaal caashaq iyo hinnaaso dumar qeybti 44aad.
Walaahi ma xuma laakiin maxaad isu dhibeysay
Dhib iguma in aan dumaashigey bartaa igala weyn
Haye ma igu keentay
Siraad qosol ayaa ay la dhacday Maslax oo markii soo galay ayaa yiri
Haye sheekada ha leyka qeyb geliyo Sahro:
Siraad caawa anigey igu keentay Siraad:
Sahro noloshii hore in ay deyso ayaa ay diidan oo ay nolol cusub bilaawdo
Laakiin qofka bani�aadamka marka uu stress badan soo maro waqti ayaa u baahan yahay
Walaahi Maslaxaow qofka kaliya ee I fahmi kara ayaa tahay
Laakiin fursad ayaa hor socota indhaha waa ay is tireysaa Wiil dhalinyaro oo mutacalim ayaa daba cararaya isla markaana qurux badan. Maslax:
Sow ma wanaagsana in iyada loo daayo intii aad jajuubi laheyd qof walba dooq ayaa uu leeyahayee.
Beri ayaa uu imaanayaa oo uu nala qadeynayaa kadib lee go�aan ka gaar
Haye wac oo u sheeg in aan beri sugeyno
Sahro markiiba Telefoon ayaa ay Garaad u dirtay una sheegtay in beri qado ay sugayaan Garaad waa uu ku farxay waana uu gartay in ay Siraad ka dambeyso. Saaka Siraad iyo Sahro si wadajir ayaa ay jikada u jireen maadaama ay Axad tahay shaqo aysan laheyn isla markaana ay tahay maalintii ay casuumeen Garaad.
Garaad markii uu salaadii Qudbada soo tukatay ayaa uu soo abaaray xaafadii uu qadada ku lahaa isbarasho ka dib ayaa qado cunid la galay markii la qadeeyey ayaa uu Maslax cudur daartay oo u sheegay inuu magaalka uu doonayo waxaana isu soo haray Garaad & labadii hablood.
Garaad oo hadalka furay ayaa yiri
Siraadey wax badan sheekadaada waan haayey in aan soomaaliya kaa soo raadiya xataa waan damcay.
Sidee Garaad maxaad iiga baahneyd
Waxaan kuu arkay in aad igu saacidi kartid jaceylka aan saaxiibtaa u dareemayo waayo iyada iima jeedo.
Kaalay adiga afaarahaas qofna kuuma casuumin jooji
Maya manta waa in uu hadlaa waa runtiis waxaan filayaa inuu weli kugu dambeeyo kii nacaska ahaa jaceylkiisa waxaana loo baahnaa in ad iska ilaawdo. Sahro waa ay xanaaqday in ay goobta ka tagto ayaa ay damacday Siraad ayaana celisay Garaad oo aan dooneynin in xaalka uu sidaas u sii xumaato ayaa yiri.
Waan ka xumahay Sahro waxba ha bixin mowduucaasna waan xeraynaa.
Sahro runta weligeed waa ay dhibi jirtay Siraad markii ay intaa tiri ayaa ay fadhiga ka cudur daaratay ciyaalkeeda aaday sheeko caadi ayaa ay galeen Garaad waa uu ka raali geliyey wixii dhacay Sahrana waa ay ka aqbashay markiiba Siraad ayaa soo diyaarisay casriyo Siraad marnaba fadhiga kuma soo noqon Garaad galab gaabadkii ayaa uu iska baxay markii salaadii Maqribka ay tukatay ayaa ay Sahro u gashay qolka Siraad oo ay ku tiri.
Runta wax badan Ciise waad iiga sheegtay kuma dhageysan taa waxa uu ahaa jaceylkii indhaha la�aa ee I haayey laakiin ha I qasbin saaxiib wax ka weyn saaxiibtinimo uma haayo Garaad.
Inuu nin wanaagsan yahay adigaa ii sheegay oo uu wax weyn kuu qabtay marxaladii xumeyd markaad ku jirtay maxay tahay sababta aadan qalbigaaga ugu furneynin. Sahro:
Waa runtaa saaxiibey inuu abaal igu leeyahay loona baahan yahay in gudo
Ok abaalka uu kuu galay miyuusan mudneyd in aad naftaada ku aaminto Sahro:
Siraad wax aan kaa qarinaayo ma jirto guurkeygii hore ee aan ku faraxsanaa waa uu burburay mana doonayo in burbur kale aan wajaho.
Waa runtaa waa tii la yiri �� GUURKAAGA HORE OO XUMAATO KAAGA DAMBE AYAA UU U BAAS BAXAA��
Guuldaro kale uma dulqaadan karo Garaad ma aqabali karo waayo waa wiil maday ku ah hooyo lacag leh oo mutacalim mana filaayo in ay guurkeena ogolaaneyso waan fahmi karaa inuu I jecel yahay dhabtiina ma difarayo inuu qalbigeyga la haayo laakiin xiriirkeena ma aha mid shaqeynayo.
Waan ku fahmi karaa laakiin garoobnimada godob ha ka dhigin maad isaga cabsida aad qabto kala hadasho. Sahro:
Taasi ma doonayo in aan dareensiiyo siduu ii daba socda waa uu igu daali doonaa kadibna iga dal doorsan doonaa.
Sow ka cabsan meysid in dareenka uu manta isaga dareemayo uu adiga ku qaban karo oo ay taasi timaado xilli Xeero & Fandhaal ay kala dhaceen. Sahro:
Casharo badan ayaa ay nolosha I bartay iminka wacad ayaan ku maray in aad nafteyda xakameeyo xoogaa waan daalanahay waan isjimcinayaa.
Sahro qolkeeda ayaa ay aaday Siraad aad ayaa ay u fahamtay meesha ay Sahro ka cabsi qabto waxayna go�aansaday in ay Garaad la hadasho subaxii intii ay Sahro musqusha ku jirtay ayaa ay Mobilekeeda ka qoratay Numberkii Garaad si ay ula xariirto oo ay ugu sheegto cabsida Sahro ay xagiisa ka qabto. Markii Sahro iyo Maslax ay shaqo tageen ayaa ay telefoonkii u dirtay Garaad wuxuuna u sheegay inuu u imaan doono xilliga duhurtii Siraad in ay saaxibteed ay farxad hesho ayaa ay dooneysay Garaad waa ay u arkeysay inuu yahay qofka ku haboon ee farxad siin kara.
Garaad xilligii uu ka soo raawaxay Jaamacada ayaa uu toos u soo aaday xaafadii Siraad waxaana dhex martay sheekadaan. Hubaal caashaq iyo hinnaaso dumar waxeey qaas u tahay Jowhar.com kala soco Jimco walba insha Alah.
0 Comments · 4691 Reads
jowhar.com3,198,251 unique visits